१२:५८, ३ सेप्टेम्बर २०२० जस्तै गरी पुनरावलोकन
२१:०७, ३० अगस्ट २०२० जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
१२:५८, ३ सेप्टेम्बर २०२०को रुपमा हालको पुनरावलोकनहरू (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
गुलामका रूपमा अफ्रीकी मानिसहरुका बारेमा त शायद सबको जानकारी छ भनेंर [[भारत]]मा रहने भएका [[अफ्रीकी]] मानिसहरुका बारेमा मानिसहरुलाईमानिसहरूलाई कम नैं जानकारी छ.
भारतका पश्चिमी तटमा जम्बुर (गुजरातको एक गाउँ) जस्तै गाँवमा यी मानिस अहिले पनि रह रहेका हुन्। यिनको [[पूर्वज]] अफ्रीकी थिए जसलाई गुलामका रूपमा यस [[उपमहाद्वीप]]मा लाईएको था। बाकीका मानिस लडाके, [[व्यापारी]] र [[नाविक]]का रूपमा यहाँ आए थिए। पूर्वी अनि दक्षिणी अफ्रिका र भारतमा [[गुजरात]]का साथ समुद्री व्यापार दुइ हजार साल पहिला स्थापित भएको थियो।
केही इतिहासकारहरुकोइतिहासकारहरूको मान्नु छ कि लाखौं अफ्रीकी मानिसहरुलेमानिसहरूले समुद्र पार गर्न यताको रुख गरेको थियो। अफ्रीकी-भारतीय मानिस सिदी ([[शीदि]]) कहलाउँछन्.
अधिकतर सिदिहरुकोसिदिहरूको प्रकार जम्बुरका मानिस सूफी मुसलमान छन्। जो मान्दछन् कि भगवानको पूजा संगीत र नृत्यका जरिए हुन्छ.
मानवविज्ञानीहरुकोमानवविज्ञानीहरूको मान्नु छ कि नर्तकहरुकोनर्तकहरूको कला पारंपरिक अफ्रीकी पूजा र भारतीय सूफी परम्पराको मिश्रण छ.
इस समुदायका नजिक आफ्नो ज्नेदेखि जोडिएका रहने एक महत्वपूर्णमहत्त्वपूर्ण साधन छ- डमाल वा ड्रम। अन्यथा सिदी समुदाय ग्रामीण भारतका अन्य गरीब तल्लोदेखि अलग छैन ।
इस इलाकेमा आउने भएका मानिस गाँवका संगीतकारहरुलाईसंगीतकारहरूलाई पैसा दिन्छन् । मानिसहरुदेखि मिले पैसेलाई मुखमा दबाएर यी मानिसहरुलाईमानिसहरूलाई शुक्रिया अदा गर्दछन्.
जम्बुरमा नागारची बाबाको दरगाह छ। जसलाई ड्रम मास्टर पनि भनिन्छ। सिदिहरुकोसिदिहरूको मान्नु छ कि ती एक अरब थिए, जसले ९०० वर्ष पहिला अफ्रिकाको यात्राको थियो र फेरि भारतमा रहने लागोस्.
जम्बुर पिछडा भयो गाँव छ। यहाँका मानिस पडोसका कुन ानहरुका लागि मजदूरीको काम गर्दछन्। सरकार पनि गरीब मानिसहरुकोमानिसहरूको सहायताका लागि लागू कार्यक्रमहरुकाकार्यक्रमहरूका तहत यिनको सहायता गर्दछ.
जम्बुर गाँवको स्थापना सिदी सैनिकहरुका परिवारहरुलेपरिवारहरूले गरेको थियो, जो यस इलाकेका पूर्व नवाबका लागि काम गरिन्थ्यो।
भारतका धेरै राजा-महाराजाहरुलेमहाराजाहरूले अफ्रीकी मानिसहरुलाईमानिसहरूलाई आफ्नो निजी अंगरक्षकहरु, नौकरहरु र संगीतकारहरुका रूपमा तैनात गरे। देशका धेरै भागहरुमाभागहरूमा त सिदिहरुलेसिदिहरूले काफी प्रगतिको र सैनिक जनरल र धेरै पल्ट त राजा पनि बनेका.
इस [[गाउँ]]का एक रहनुमा हसन भाईको कहना छ कि तिनको पिता मोजाम्बिकदेखि आए थिए। तिनलाई पुर्तगाली सेनामा काम गर्नका लागि लाईएको था। जो नजिकका एक बंदरगाहको नियन्त्रण गर्दथ्यो।
हालाँकि अधिकतर सिदिहरुलाईसिदिहरूलाई आफ्नो पूर्वजहरुका बारेमा अधिक केही छैन पता। हसन भन्दछन् कि बच्चाहरु अफ्रिकाका बारेमा केही छैन जान्दै र जो अफ्रिकाका बारेमा जानन्थे। ती अब संसारमा छैन रहे.
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/905391" बाट अनुप्रेषित